फर्निचर उद्योगमा आगलागी हुँदा ५० लाख बढीको क्षति « रिपोर्टर्स नेपाल
फर्निचर उद्योगमा आगलागी हुँदा ५० लाख बढीको क्षति
प्रकाशित मिति : 2021 April 13, 11:09 am
खोटाङ, ३१ चैत्र । फर्निचर उद्योगमा आगलागी हुँदा खोटाङमा रु ५० लाख बढीको क्षति भएको छ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१ रत्नपार्कमा सञ्चालित गणेश फर्निचर उद्योगमा आज बिहान भएको आगलागीमा रु ५० लाख ८६ हजार बराबरको क्षति भएको प्रहरीले अनुमान गरेको छ ।
स्थानीय हर्कराज राईले सञ्चालन गर्नुभएको फर्निचर उद्योगमा विद्युत् चुहिएर आगलागी भएको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद चिमोरियाले बताए । बिहान करीब ४ः३० बजेको समयमा शुरु भएको आगोले उद्योगमा रहेको मेसेनरी औजार, तयारी फर्निचर, काठपातलगायत सबै जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उद्योगमा आगलागी भएको खबर पाउनसाथ नेपाली सेना, जनपद तथा सशस्त्र प्रहरी, नगरपालिकाको वारुणयन्त्र र स्थानीय बासिन्दाले करीब दुई घण्टा लगाएर आगो नियन्त्रणमा लिएको सञ्चालक राईले बताए । जस्तापाताको छानो भएको उद्योगको एकतले भवनमा लागेको आगो समयमा नियन्त्रणमा लिइएकाले आसपासका घरहरुमा क्षति हुन पाएन ।
उद्योगमा भएको आगो नियन्त्रणमा लिइए पनि कुनै सामग्री सुरक्षित गर्न नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ । उद्योग सञ्चालक राईका अनुसार भण्डारण गृह र बिक्री कक्षमा राखिएका बाहेक सबै उत्पादित सामग्रीसमेत जलेर नष्ट भएको छ । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा चैत महिनामा मात्रै दुई दर्जन बढी घर तथा गोठमा आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ । स्थानीय सामुदायिक वनमा लागेको डढेलो गाउँमा पसेपछि घर तथा गोठमा भएको आगलागीमा अहिलेसम्म मानवीय क्षति नभए पनि पशुचौपाया भने ठूलो मात्रामा जलेर मरेका छन् ।
घर तथा गोठमा भएको आगलागीमा नगद, सुनचाँदी, पशुचौपाया, अन्नपात, लत्ताकपडा, काठपातलगायत जल्दा करोडौँको क्षति भएको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक सागर साहले जानकारी दिए । जिल्लामा भएका आगलागीका घटनाको यकिन विवरण अझै आउन बाँकी रहेको जनाइएको छ । जिल्लाका कतिपय सामुदायिक वनमा अझै आगलागी भइरहेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । कतिपय ठाउँका स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो नजिक पर्ने वनमा आफैँ आगो लगाउने गरेको स्रोतले जनाएको छ । रासस
पर्वतारोहण सङ्घको सदस्यमा रामचन्द्र धमला निर्वाचित
काठमाडौं, २८ जेठ । नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको अध्यक्षमा निमा नुरु शेर्पा निर्वाचित भएका छन् ।
प्रचण्डलाई उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाद्धारा पुस्तक उपहार
काठमाडौं, २८ जेठ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष
अवरुद्ध नारायणगढ – मुग्लिन सडक सञ्चालनमा
मुग्लिन, जेठ २८ । वर्षासँगै पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको नारायणगढ –मुग्लिन सडकखण्ड पुनःसञ्चालन भएको छ
पोखरा, जेठ २८। गत बैशाख २६ गते एक महिलाको अश्लिल भिडियो खिचे । त्यसपछि उनले
काठमाडौं उपत्यकामा भूकम्पको ठूलो धक्का
काठमाडौं, २८ जेठ । उपत्यकालगायतका आसपासका जिल्लाहरुमा भूकम्पको धक्का महशुश भएको छ । आज विहान
काठमाडौँ,२७ जेठ । युवा पिँढीलाई लागुऔषधबाट जोगाउन र आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले बनाउने बजेटमा
ठूला जलाशय आयोजना सरकारले आफैँले बनाउन सांसदको माग
काठमाडौँ,२७ जेठ । सांसदहरुले ठूला जलाशाययुक्त आयोजना सरकारले आफ्नै बनाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको
प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा मिटरब्याजी तेलीलाई पक्रन निर्देशन
काठमाडौँ,२७ जेठ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सप्तरीका मिटरब्याजी रामदेव तेलीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन
प्रशारण लाइन चढेका माइला विकको सेनाको हेलिकोप्टरद्वारा उद्धार
काठमाडौं, २८ जेठ । नेपाली सेनाको होलिकोप्टरले विद्युत प्रशारण लाइन चढेका माइला विकको उद्धार गरेको
माइलालाई बचाउन करोडको नोक्शानी; प्राधिकरणद्वारा प्रहरी, सेना हुँदै प्रधानमन्त्री सम्म हारगुहार
काठमाडौं, २८ जेठ । ककनी गाउँपालिका-७ स्थित त्रिशुली मातातीर्थ प्रशारण लाइनमा माइला विक अझै छन्
यी हुन् एमालेलाई चुनावमा सघाउने कलाकार (फोटोफिचर)
काठमाडौं, २८ जेठ । नेकपा एमालेलाई स्थानीय चुनावमा सघाउने कलाकारहरु उक्त दलका अध्यक्ष केपी शर्मा